एक्कासि यो के भयो? नेपालमा फेरि थपिए ३ नयाँ संक्रमित, हेर्नुस यिनै हुन नयाँ संक्रमित – दैनिक नेपाल न्युज
एक्कासि यो के भयो? नेपालमा फेरि थपिए ३ नयाँ संक्रमित, हेर्नुस यिनै हुन नयाँ संक्रमित
पर्साको वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालको आइसोलेशनमा रहेका तीन भारतीयमा नागरिकमा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । आइसोलेशनमा राखिएका २१ जनामध्ये तीन जनामा कोभिड–१९ सङ्क्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको हो ।
पोर्न स्टार भएकै कारण आफुले अभिनेत्री सनी लियोनीलाई मन पराएको पति डेनियलको दावी